Izimpawu ezi-5 Uphuma Kumlando Wakho We-MySQL | Martech Zone
Izimpawu ezi-5 Uphuma Database Yakho ye-MySQL
UMsombuluko, May 4, 2015 UMsombuluko, May 4, 2015 UMike Azevedo
Isimo sokuphathwa kwedatha siyinkimbinkimbi futhi siyavela ngokushesha. Akukho okugcizelela lokhu kuziphendukela kokuvela kokuvela 'kwezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu' - noma izinhlelo zokusebenza ezicubungula izigidi zokusebenzisana komsebenzisi ngomzuzwana. I-Factor ku-Big Data kanye nefu, futhi kuyacaca ukuthi abathengisi be-e-commerce badinga isizukulwane esisha semininingwane engenza kangcono futhi ikhule ngokushesha.
Noma yiliphi ibhizinisi eliku-inthanethi elingenayo i-database ebuyekeziwe kungenzeka ukuthi lisebenzisa i-MySQL, i-database engakaze ibuyekezwe kusukela yaqala ukusebenza ngo-1995. Ngemuva kwakho konke, igama elithi “NewSQL” alizange libe yingxenye yesichazamazwi sedijithali kuze kube nguMat Aslett, umhlaziyi weQembu le-451 , uyihlanganise ngo-2011.
Ngenkathi i-MySQL ikwazi ukuphatha ithrafikhi enhle, njengoba ibhizinisi liqhubeka nokukhula, i-database yayo izofinyelela umthamo omkhulu futhi iwebhusayithi yayo izoyeka ukusebenza kahle. Uma ungaqiniseki ukuthi inhlangano yakho isilungele i-database ye-NewSQL noma cha, nazi izimpawu ezinhlanu okungenzeka uphuma kuzo nge-MySQL:
Kunzima ukuphatha ukufundwa, ukubhala nokubuyekeza - I-MySQL inokulinganiselwa komthamo. Njengoba abathengi abaningi ngokwengeziwe beqedela ukuthengiselana kuwebhusayithi yakho, kumane nje kuyindaba yesikhathi ngaphambi kwezitebele zakho zokugcina imininingwane. Ngaphezu kwalokho, njengoba umthwalo wakho ukhula, futhi ukuthola kunzima ukuphatha ukufundwa okwengeziwe futhi ubhala, ungahle udinge i-database ehlukile. I-MySQL ingakala ukufundwa “ngezigqila ezifundwayo”, kepha izinhlelo zokusebenza kufanele zazi ukuthi okufundwayo akuhambisani ne-write-master. Isibonelo, lapho ikhasimende livuselela imikhiqizo enqoleni yalo ye-e-commerce, kufanele ifundwe kubhala bhala. Uma kungenjalo, uzibeka engcupheni ukuthi amanani atholakalayo ongathembisa ukuthi awalungile. Uma lokho kwenzeka, uzoba nebhodlela endaweni embi kunazo zonke: umugqa wakho wokuphuma we-e-commerce. Isikhubekiso ekuphumeni kungaholela ezinqoleni ezilahliwe, noma okubi kakhulu, uzothengisa uhlu lwempahla ongenalo, futhi kufanele ubhekane namakhasimende athukuthele, futhi nokuvezwa okungalungile kwezokuxhumana.
Slow analytics nokubika - Imininingwane yolwazi ye-MySQL ayihlinzeki nganoma yisiphi isikhathi sangempela analytics amakhono, futhi abahlinzeki ngokusekelwa kokwakhiwa kwamanye ama-SQL. Ukubhekana nale nkinga, zombili i-Multi-Version Concurrency Control (MVCC) neMassively Parallel Processing (MPP) ziyadingeka ukucubungula umthwalo omningi ngoba zivumela ukubhala kanye analytics ukwenzeka ngaphandle kokuphazanyiswa, futhi usebenzise ama-node amaningi nama-cores amaningi nge-node ngayinye ukwenza imibuzo ye-analytic ihambe ngokushesha.
Isikhathi sokuphumula esivamile - Imininingwane yolwazi ye-MySQL yakhiwe ngephuzu elilodwa lokwehluleka, okusho ukuthi uma kukhona okuthile - okufana nedrayivu, i-motherboard, noma imemori - kwehluleka, yonke i-database izokwehluleka. Ngenxa yalokho, ungahle uhlangane nesikhathi sokuphumula esijwayelekile, esingaholela ekulahlekelweni kwemali engenayo. Ungasebenzisa ukucheka nezigqila, kepha lezi zibuthakathaka futhi azikwazi ukuphatha inani elikhulu lomgwaqo. I-database yokukala igcina amakhophi amaningi wedatha yakho, inikezela ukubekezelelana kwamaphutha okwakhelwe ngaphakathi futhi igcine ukusebenza yize noma / noma ukwehluleka kwediski.
Izindleko zokuthuthukiswa okuphezulu - Onjiniyela abasebenza ngemininingwane ye-MySQL kumele bavame ukuchitha ingxenye enkulu yesikhathi sabo ukulungisa izingqinamba zamapayipi noma ukubhekana nokwehluleka kwe-database. Abathuthukisi abasebenza nge-database yokukhipha bakhululekile esikhundleni salokho basebenzela ukuthuthukisa izici nokwenza umkhiqizo uthengiswe ngokushesha. Ngenxa yalokhu, isikhathi sokumaketha siyancipha futhi izinkampani ze-e-commerce ziyakwazi ukuthola imali ngokushesha.
Amaseva akhululiwe - Amaseva ukuphuma kwe-RAM isikhathi eside, noma njalo usuku lonke, kuyizinkomba ezisemqoka zokuthi i-MySQL ayikwazi ukuhambisana nokukhula kwebhizinisi. Ukungeza i-Hardware ukulungisa okusheshayo, kepha futhi kuyabiza kakhulu futhi akusona isixazululo sesikhathi eside. Uma izinhlangano zisebenzise indlela yokulinganisa, idatha ingaphindaphindeka kuwo wonke ama-node, futhi njengoba ukuthengiselana kukhuphuka ngosayizi nenani, umthwalo womsebenzi uyashintshelwa kwamanye ama-node angaphakathi kwe-database.
Kusobala, i-MySQL inokulinganiselwa kwayo, nokuthi isikhathi esinikeziwe nokukhula kwethrafikhi, noma iyiphi i-database ye-MySQL izobhekana nezinkinga zokusebenza nezokubambezeleka. Futhi kumawebhusayithi e-commerce, lezo zinto ezingasebenzi kahle cishe zizohumushela kwimali engenayo ephuthelwe.
Ngemuva kwakho konke, akufanele kusimangaze lapho ukuthi ubuchwepheshe obakhiwa eminyakeni engamashumi amabili edlule bunzima ukuqhubeka ezweni lomhlaba wanamuhla elisheshayo. Cabanga ngakho: kungenzeka kanjani ukuthi abahleli bohlelo ngo-1995 babone ukuthi i-Intanethi izoba namandla kangakanani empeleni?
Tags: clustrixukusebenza kwedathai-database yesikhathi esizayomysqlukwakhiwa kwe-mysqlukuxhumana kwe-mysqlmysql ifundekaukubika kwe-mysqlizibuyekezo ze-mysqli-mysql iyabhala
UMike unguMongameli kanye noMphathi Oyinhloko we UClustrix. UMike uneminyaka engaphezu kwengu-25 yokuthengisa kanye nesipiliyoni sobuholi obuphezulu ekusetshenzisweni kokulinganisa ama-analytic, i-grid computing, ingqalasizinda yokugcina, ukuphepha nokuthengisa.
3 Imithetho ye-Psychology in Sales and Marketing
Amadivayisi Abhekene Namakhasimende nokuthi Ungamaketha Kanjani Nawo